Waca dhiisne humna WBO cimsuu waan dhufuu maluuf qophaawu – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooWaca dhiisne humna WBO cimsuu waan dhufuu maluuf qophaawu
Waca dhiisne humna WBO cimsuu waan dhufuu maluuf qophaawu
Adama Roobaa (pen name Baarentuu Gadaa) irraa! Adoolessa 9, 2018
Harka afuune Ilmaan Oromoo ergaa koo arguuf carraa qabdan hundinu. Maquma koo isa dhugaatinin barreessaa jira. Fuul duraaf qaaman wal baruu ni malla. An nama Oromiyaa walaboomete arguuf hawwii guddaa qabu dha. Kayyo kana galmaan gayuufis tattaaffii barbaachisu mara gochuuf qophii dha. Qabsoon uummata Oromoo wayyaanee dirqisiise waan an amma waan akka jijjiirama fakkatu kana dhalche. Garuu akka kiyyatti kun jijjiirma osoo hin taane tooftaa qabsoo Oromoo maseensu ti. Waan jijjiirama fakkaatu kana kan dhalche qabsoo Oromoon tokkummaan gaggeesse dha; qeerroo, WBO fi ABO shoora olaana haa taphatan. Qabsoon Oromoon gamtaadhan gaggeesse waan armaan gadii kana uume:
Humna EPRDF dadhabsiise. Dhiigni innaa jigu OPDOs hanga tokko ni dhukkubse. Buqqa’uun Oromos akka tokkoomu godhe. tokkummaan humna ta’e diina raase.
Raafamuun TPLF kun akka warri dhihaa wayyaanee tuffatan godhe (otuu haasofnu an missense loltu biyya USA waan ta’eef dhimma kana irratti waa bayyen beeka). Horii irraa xiqqeessuf, yoo didani itti fufan guutumatti irra muruuf jiru. Kun akka wayyaanen waan jijjiirama fakkaatu kana akka goote dirqisiise. Jijjiramni kun guutumatti deeggarsa warra dhihaa qaba. Garuu jijjiirama Oromoon hawwe osoo hin taane kan kaampin Itoophiyaa hawwitu ta’e malee. Deeggarsi warra dhihaa kun akka kaampin Itoophiya hoo’itu godhe. Kanaaf activistoonni xawalwaallen keenya dafani nutti gara galan. Isaan bishaan gabatee irraati. Gara faaydaa fi mirkqaana jallatu. Kun nu dinquu hin qabu. Toofta irra itti aannu malachu malee.
Maarre Nuti amma akka qabsaawota walabummaatti maal gochuu qabna?
Waca dhiisne humna WBO cimsuu (buusii ji’aa dacha 3 daballee) waan dhufuu maluuf qophaawu. Dabalataan yeroo dhihoo keessatti fund raise campaign goone Oromoo warra osoo hin galin hafe itti dhiyaanne ofiiti ida’uu.
Garaa bal’annee mooraa teenya bal’isuu. Bakki iccitiin qabamuu qabu bakkuma ajaja waraana fi tofta lolaa ti. Akka xiinxala kiyyatti fi odeeffanno tokko tokko qabutti OPDO fi warri biyya galan kun garee siyaasa tokko uumuf deemu. Kan kana hojjachaa jiru adda durummaan OPDO fi ‘Oromo leadership convection’ tana dura dhaabbate sana dha. Sobani midiyaa haa gaggeessan malee harka lafa jalaatin ABO kophxeessuu irratti hojjachaa jiran waan ta’eef dhugaa qabnu uummatatti gadi baasne ibsuun mooraa guddicha Oromoon hundi keessatti of argu uumuu yoo dandeenye dhaloota haara irra abdi guutun qaba akka ABO fi WBO jala hiriiru. Garuu ifatti baane balaaleffachuu osoo hin taane iifaatti baane iyyinee saba ala kana jiru bira ga’uu feesisa keessafu odoo Abiyi fi lammaan hin dhufne dura.
Akka xiinxala kiyyatti yoo akka amma deemnu kanatti garee gareedhan deemne waala lama keesssa tokkotu uumamuu mala:
Osomu bilisoomnellee akka warra ‘south Sudan’ kanatti wal fixuuf deemna. Kun Kan hafu, daddafne mooraa teenya bal’isuudhan uummanni bal’aan Oromoo waan waliif dhabee fi waliin qabu (dantaa waloo) irratti akka xiyyeefatu gochuu dha.
Kaampin ilmaan Oromoo Itoophiyaa leellisu kun akkuma tana duraa 1991 habashaa wajjiin ta’ee ABO rukute ammas yoo rukutee taphaa ala nu baase, sana booda habashaan lachuu wal taate isaan ni rukutti, sana booda uummanni keenya ammas saamamuu itti fufa. Kun abadan ta’uu hin qabu. Furmaanni isaa nu harka jira. Murnoota Oromoo kanneen itti dhiyaanne garaa bal’annee yoo xiqaate wal hubannaa tokko qabaachu qabna. Nama jechuun nama waan harkaa qabutti fayyadamuu danda’ee dha. Oromoo tokkoomsuu maalif dadhabne? Yoo waan harka keenya keessa jiru dadhabne kan diinaa kan harka keenya ala jiru akkamiin irra aanna re? Kun yaada kooti. Isinitti tolu dhiisun ni mala. Garuu abdiin koo bakki kun bakka itti walmorminee waan saba keenyaf ta’uu wajjiin karoorsinu je’ee waanan amanuufan qulqullummaadhan barreessaa jira. Yaadadhaa 1991, innaa waraanni ABO fi IFLO harargee keessatti wal dhawaa ture, wayyaaneen Finfinnee fi Wallagga seente qabachaa turte.
Gabaabumatti: Waan Maraafu WBO kan dur caalaa haa jabeessinu. Waa baay’etu as deemaa jira waan ta’eef!
Signs of a Thaw for Ethiopia and Eritrea